I-Ordesa de Manuel Vilas: kuyini nokuthi umbhali usitshelani encwadini | Izincwadi Zamanje
I-Ordesa de Manuel Vilas
Enye yezincwadi enikeze kakhulu ukukhuluma ngayo I-Ordesa kaManuel Vilas. Kungumsebenzi lapho abaningi babona ingxenye yempilo yakhe ibonakala, noma kungabonakala njengokulandisa komlobi uqobo. Kepha i-Ordesa ingaphezulu kakhulu.
Okulandelayo, sifuna ukukhuluma nawe mayelana nencwadi, umbhali wayo, nakho konke okumele ukubheke ukuze uqale ukuyifunda ngokushesha okukhulu. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi i-Ordesa de Manuel Vilas imayelana nani?
1 Manuel Vilas uyaba ubani
2 Incwadi ka-Ordesa
2.1 Futhi i-Ordesa imayelana nani?
3 Uyini amazwibela ka-Ordesa de Manuel Vila?
4 Okunye okukhishwe ku-Ordesa de Manuel Vila
Manuel Vilas uyaba ubani
UManuel Vilas ungumbhali owazalelwa eHuesca ngo-1962. Wenza izifundo ze-Hispanic Philology futhi, iminyaka engamashumi amabili wayesebenza njengothisha wesikole samabanga aphakeme. Kodwa-ke, ucingo lokuloba lwamenza washiya umsebenzi wakhe wakhetha izincwadi. Waqala ukuthuthukisa izinkondlo, kanye nama-eseyi namanoveli. Eqinisweni, i-Ordesa akuyona impumelelo yakhe yokuqala enkulu, ngaphambi kokuba kwandulelwe abanye abaningi abanjengo-Aire Nuestro, ngo-2009, noma i-Lou Red era español, ngo-2016.
Futhi kufanele kukhunjulwe ukuthi waba ngowamanqamu kwiPlaneta Award ngo-2019 ngomsebenzi wakhe "Injabulo ebudlelwaneni phakathi kwabazali nezingane."
Njengombhali, Uhlanganyele kweminye imithombo yezindaba eyaziwa kakhulu eSpain. Sikhuluma ngo-El Mundo noma u-El Heraldo de Aragón (bobabili abavela eqenjini iVocento), iLa Vanguardia, i-El País, i-ABC… Ngisho nasemsakazweni bathole indawo futhi baphinde basebenzisana noCadena Ser.
Ngokusho kombhali uqobo, u-Ordesa waqala ukwakheka ngemuva kokushona kukanina, okwenzeka ngoMeyi 2014. KuVilas kwaba unyaka omubi, kwazise naye wahlukanisa ngaleso sikhathi.
Incwadi Yaqhubeka ukuthengiswa ngo-2018 yindlu yokushicilela i-Alfaguara futhi yakwazi ukuphumelela. Lathola ama-edishini ali-14, wonke engaphansi konyaka, okwenza ukuthi lithengise amakhophi angaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu. Kwakuyincwadi yonyaka (ka-2018) yemithombo yezindaba ehlukahlukene efana ne-El País, La Vanguardia, El Mundo, El Correo ... Futhi iye yaphesheya, ngoba amanye amazwe amaningi awubona umsebenzi (United States, United Kingdom, I-Italy, iPortugal…). Izinguqulo eziningana zale ncwadi zaphuma ngemuva konyaka, njenge-Italian noma isiPutukezi.
Futhi i-Ordesa imayelana nani?
Uma sikutshele impendulo esheshayo nebambekayo, Sizokutshela ukuthi i-Ordesa de Manuel Vila isebenza ngobudlelwano obukhona phakathi kwabazali nezingane.
Kuyinto inoveli enokuthinta komuntu uqobo kombhali uqobo futhi namuhla iyincwadi eyinkomba yabo bobabili ababhali kanye nomphakathi ofundwayo jikelele.
Abaningi abanye ababhali banikeze imibono nge-Ordesa. Singaqokomisa amanye amagama ezinye ezaziwa kakhulu njenge:
"Enye yezincwadi ezinobuntu, ezijulile, neziduduzayo engizifunde esikhathini eside."
«Yi-albhamu, ingobo yomlando, inkumbulo ngaphandle kwamanga noma induduzo yempilo, yesikhathi, yomndeni, yesigaba senhlalo esigwetshwe umzamo omkhulu nezithelo ezincane. […] Kuthatha ukunemba okukhulu ukubala lezi zinto, kuthatha i-asidi, ummese obukhali, iphini ngqo ehlaba imbumbulu yomhlaba ize. Okusele ekugcineni yimizwa ehlanzekile yeqiniso nosizi lwako konke okwalahleka. "
U-Antonio Muñoz Molina
Para muchos, I-Ordesa ifana nencwadi eseyishonile uManuel Vila ayibhalele abazali bakhe. Ngezahluko ezimfishane, ezihlangene, sifunda indaba yomlingiswa ongenakuzisiza futhi ogxiliwe ozama ukuphila ngokusemandleni akhe, obona ezinye izinto ezibonakala "zincane futhi zingabalulekile" futhi empeleni zibaluleke kakhulu kunalokho esikholelwa kukho. .
Kubhalwe ngolimi olulula kepha ngasikhathi sinye kube nzima, futhi kunezindima ezithile okungaba nzima ukuziqonda, noma ukwazi kahle ukuthi umbhali uqobo ubhekise kuphi. Unesipiliyoni, ikakhulukazi ezinkondlweni, kepha kaningi uyona ngokusebenzisa lezi zinsiza ukulandisa, okwenza umfundi alahleke kancane.
Ngokuqondene nendaba, akungabazeki ukuthi ikhuluma ngokusuka enhliziyweni, ngoba iveza lokho abephila ngakho, noma kungenjalo kumuntu wokuqala, kodwa ngomlingiswa ofana kakhulu ongagcini ngokutshela okwedlule, kepha futhi nesikhathi sakhe ukuze umfundi unendlela yokuphila kwakhe. Ngokubheka ukuthi lezo zokutshela impilo yomuntu imfashini kakhulu, kuyincwadi ongayithanda uma uthanda lolo hlobo lwemibhalo.
Uyini amazwibela ka-Ordesa de Manuel Vila?
Amazwibela we-Ordesa de Manuel Vila ngu okuthile kwasekuqaleni futhi okuhluke kakhulu kulokho obungakulindela kunoveli. Futhi kubhalwe kumuntu wesithathu futhi akuvezi umyalezo weqiniso ophethwe yile ncwadi, kepha kuyindida kakhulu. Mhlawumbe yingakho idonsela ukunakwa.
Ibhalwe kwesinye isikhathi izinyembezi, futhi njalo ivela kumzwelo, le ncwadi ingumlando osondelene kakhulu waseSpain emashumini eminyaka amuva nje, kepha futhi ilandisa ngakho konke okusikhumbuza ukuthi singabantu abasengozini, ngesidingo sokuvuka siqhubeke lapho kungekho lutho Kubonakala sengathi kwenza kwenzeke, lapho cishe zonke izibopho ezisihlanganisile nabanye sezinyamalele noma seziyekile. Futhi siyasinda.
Okunye okukhishwe ku-Ordesa de Manuel Vila
Ngokusebenzisa Indlu Engahleliwe, encwadini yakho yemithombo yencwadi, singaba ne- Indlela ka-Ordesa yokuqala ngokukhishwa okuthile encwadini. Sizishiya ngezansi ukuze unqume ukuthi uzozifunda noma cha.
Futhi ngaqala ukubhala le ncwadi. Bengicabanga ukuthi isimo somphefumulo wami siyinkumbulo engacacile yento eyenzeka endaweni esenyakatho yeSpain ebizwa nge-Ordesa, indawo egcwele izintaba, futhi kwakuyinkumbulo ephuzi, umbala ophuzi wahlasela igama le-Ordesa, kwathi ngemuva kwe-Ordesa isibalo sikababa sakhishwa ehlobo lika-1969. »
«Lapho impilo ikuvumela ukuthi ubone umshado wokwesaba ngenjabulo, usukulungele ukugcwaliseka. Ukwesaba sekubona ukuqothuka komhlaba. "
"Umama wayengumxoxi wezindaba ongahlelekile. Nami futhi. Kumama ngazuza njengefa isiphithiphithi sokulandisa. Angikutholanga njengefa kunoma yiluphi usiko lwezincwadi, oludala noma lwe-avant-garde. "
“Wonke umuntu ophuza ngokweqile ufika esikhathini lapho kufanele akhethe phakathi kokuqhubeka nokuphuza noma ukuqhubeka nokuphila. Uhlobo lokukhetha isipelingi: noma ugcina ama-bes noma ama-uves. […] Noma ngubani ophuze kakhulu uyazi ukuthi utshwala buyithuluzi eligqekeza ukukhiya komhlaba. "
«Ngibhala ngoba abapristi bangifundise ukubhala. Ukwelashwa kwezigidi ezingamakhulu ayisikhombisa. Leyo yindida enkulu yempilo yabampofu eSpain: Ngikweleta kakhulu abapristi kuneSpanish Socialist Workers Party. Isimanga seSpain ngaso sonke isikhathi siwumsebenzi wobuciko. "
«Angikuthandi okwenziwa iSpain kubazali bami, noma akwenzayo kimi. Ngokuphikisana nokuhlukaniswa kwabazali bami angisakwazi ukwenza lutho, akunakulinganiswa. Ngingakwenza nje ukuthi kungagcwaliseki kimi, kodwa sekucishe kwagcwaliseka. "
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » I-Ordesa de Manuel Vilas
Izincwadi zomlando ezisuselwa emaqinisweni omlando